किचकन्यासँग रोमान्स गरेको भिडियो भाइरल (हेर्नुहोस् भिडियो) - Nepali Virals
किचकन्यासँग रोमान्स गरेको भिडियो भाइरल (हेर्नुहोस् भिडियो)
२७ फाल्गुन २०७२, बिहीबार १०:१५	6,050 पटक-पढिएको
किचकन्याको ’boutमा धेरैले सुनेको हुनुपर्छ । बाटोघाटोदेखि कोठाको ओच्छ्यानसम्म किचकन्याले सताएको कथाहरु हामीले सुन्दै आएका छौ । पछिल्लो समय भूत प्रेतको बिश्वास घटेसंगै डर पनि घट्दै गएको छ तर पनि भूतसंग जोडिएका बिगतका कथाहरु सुन्दा जो कोहीको पनि आङ जिरिङ्ग हुन्छ । किनकी भूत प्रेतका कथाहरु निकै डरलाग्दा हुन्छन । सुन्नेको त रौ ठाडो हुन्छ भने भोग्नेको हालत कस्तो होला ?
ग्रामिण क्षेत्रमा मात्रै होइन राजधानी काठमाडौँमा समेत किचकन्याले सताएको बिभिन्न कथाहरु छन् । कथा मात्रै होइन किचकन्यासंग प्रत्यक्ष सम्बाद गरेका भनिएका व्यक्तिहरु अझै जीवित नै छन् । उनीहरुको कथा पत्याउनु र नपत्याउनु तपाई हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत सरोकार हो तर बुझेर हेर्दा कथाहरु वास्तविक निकट लाग्छन ।
राजधानीको पुरानो बागमती पूल थापाथली प्रसुति आसपास धेरै मानिस किचकन्याको सिकार भएको भनाइ छ । त्यस्तै काठमाडौंको टेकु भंसार्, नरदेबी ताम्सिपाखा, जयबागेश्वरी-सिफल आदि ठाउँमा किचकन्या देखिएको भेटिएको कथाहरु सुनिन्छ ।
को हुन् किचकन्या ?
बिशेषत: मध्यरातमा बाटोमा देखिने युवती हुन् किचकन्या । किचकन्या हेर्दा एकदमै सुन्दरी राम्री युवती जस्तै देखिने बताइन्छ । बाटोमा बिभिन्न बहाना गरेर पुरुषसंग नजिकिने प्रत्यक्ष भोगेकाहरु बताउछन । त्यसो त उनीहरु आफु बाटोमा अलपत्र परेको बहाना गर्ने देखि माया प्रेमका अनेक नाटक रच्ने गर्दछन । किचकन्याले बिशेषत: पुरुषहरुलाई सताउने गर्दछन ।
महिलालाई भने उनीहरु केही गर्दैनन् । त्यसो त तपाइले सवारीसाधनमा जुत्ता, चुरा, पोते लगायत देख्नु भएको होला । यो किचकन्याबाट जोगिनकै लागि राखिएको हो । महिलाले लगाउने बस्त्र र पहिरन राख्दा किचकन्याले दुख दिदैन भन्ने मान्यता छ । किचकन्याबाट सिकार हुनेहरु कोही बिरामी पर्ने त कोहि लहलहैमा लागेर धन सम्पति सकाउने गरेको बताइन्छ ।
रानीपोखरीमा किचकन्य र राजाको रोमान्स
रानीपोखरी काठमाडौं नगरको मध्यमा अवस्थित एक मानव निर्मित पोखरी हो । आफ्नो माइला छोरा चक्रवर्तेन्द्र मल्लको मृत्युपश्चात राजा प्रताप मल्लले शोकाकूल रानीलाई खुसी तुल्याउने उद्देश्यले ई.सं. १६६५ मा उक्त पोखरी निर्माण गरेका थिए । पोखरीको दक्षिण किनारमा हात्तीको मूर्तिमाथि आफू र आफ्ना दुई छोरा मोहिपतेन र चक्रवर्तेन्द्रको सालिक पनि राजा प्रताप मल्लले निर्माण गराएका थिए ।
एकसय असी मिटर लम्बाइ र १४० मिटर चौडाइ रहेको सो पोखरीले ६२ रोपनी १३ आना क्षेत्रफल ओगटेको छ । वि.सं. १९९०को भूकम्पमा मन्दिरको गजुर भत्केपछि जुद्धशमशेरले रानीपोखरी मन्दिरलाई अहिलेको स्वरूप दिएका हुन् ।
रानीपोखरीमा हात्तीमाथी राजाको मुर्ती बनाएर राख्नुमा एउटा किम्बदन्ति रहेको पाइन्छ । यो पोखरी बनेपछि राजा प्रताप मल्ल सधैं नुहाउन आउने गर्दथे, यसरी पोखरीमा नुहाउन आउने क्रममा राजाको एक किचकन्यासँग भेट भएर मायाप्रेम बसेछ । यसैक्रममा राजा र किचकन्याको संसर्गबाट किचकन्या गर्भवती समेत भइछ ।
यता राजा पनि दुब्लाउँदै गएको देखेर भाइभारदारहरू चिन्तित् भएर के कारणले यसरी राजा दुब्लाउँदै गएको भनेर खोजी भएछ र राजा र किचकन्याको प्रेम प्रसँग पत्ता लागेछ । त्यस्तै किचकन्या गर्भवती भएको कुरा पनि थाहा भएछ । यो कुरा पत्ता लागेपछि अचम्म हुनलाग्यो यसो हुनुहुँदैन भनेर भाइभारदार तथा गुरूपुरोहितहरू मिलेर किचकन्यालाई बसमा पारेछन ।
गर्भवती किचकन्याको भ्रूणसहित पोकोपरेर रानीपोखरीको छेउमा विशाल हात्ती त्यसमा राजा, रानी र युवराजसहित चढेको मुर्ती बनाएर त्यस हात्तीको अघिल्लो खुट्टाले किचकन्या र भ्रूण सहितको पोकोलाई कुल्चेर राखेमा पछि फेरि दु:ख दिदैन भनेर त्यसरी उक्त मु‍र्ती स्थापना गरिएको भन्ने किम्बदन्ति छ ।
यो भिडियोमा किचकन्याले राती कोठामा आएर रोमान्स गरेको देखाइएको छ । यो रियल नभएर जानकारीमुलक रिल भिडियो मात्रै हो ।
महिलाका ९ अनौठो तथ्य जुन तपाई थाहै छैन
अघिल्लो महिलाका ९ अनौठो तथ्य जुन तपाई थाहै छैन
पछिल्लो केटीहरु यस्तो अश्लिल फिल्म हेर्न रुचाउछन् (भिडियो सहित)